Archive du 24-mai-2022
Mikorapaka ny fitondrana Te hiady mafy amin’ny fanondranan'olona
Nanaitra ary niteraka adihevitra ny fampitam-baovaon’ny Minisiteran’ny raharaham-bahiny amin’ny fanamafisana ny fepetra ho an’ireo olona handeha hivoaka an’i Madagasikara. “Mandalo any amin'ny Minisiteran'ny Filaminam-bahoaka hanaovana fanadihadiana momba ny fitondran-tena sy fandinihana ny zava-misy”
Tonga ny mpanao tomban’ny FMI Mbola lavitr’ezaka ny famoaham-bola…
Hiditra amin’ny dingana faharoa eo amin’ny tombana sy ny fanatanterahana ny praograman’asa iarahana amin’i Madagasikara ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena na FMI,
Tsy hitan’ny karatra
Raikitra indray aloha izany ny fandaminana vaovao ny fifamoivoizana ho an’ny eto Antananarivo. Io nampiharina io ny andrana eo Ambohijatovo sy Analakely, izay misy ny lafitsarany, ary eo ihany koa ny lafiratsiny.
SARIMIHETSIKA MITOHY NY FIKETREHANA NY “BAD BOYS 4”
Io tsy misy miato izany, hoy ny filohan’ny marika Sony, Tom Rothman, fa mbola mitohy hatramin’izao ny fiketrehana ny sarimihetsika “Bad Boys 4”.
Krizy ara-tsakafo maneran-tany Tena maty ho azy eto raha tsy mamboly sy miompy
Manomana tetibola 30 miliara dolara hiomanana amin’ny krizy ara-tsakafo maneran-tany ny Banky Iraisam-pirenena. Atokana hanohanana ireo tetikasa efa misy sy vaovao amin’ny sehatra mifandraika amin’ny ara-tsakafo io:
Durlin Retogniane “Mikaikaika koa ireo mpamboly sy mpiompy ary mpanjono”
Miadana ny fiaingana amin’ny resaka fizahantany eto Madagasikara izao, hoy ny manam-pahaizana momba azy io, Durlin Retogniane.
Antananarivo Ahiana hitroatra ireo mpivarotra
Nanao fanambarana manohitra marindrano ny mety ho fampidiran’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) orinasa tsy miankina hitaky ny haba eny anivon'ny tsena ireo mpivarotra manerana ny boriborintany 6 omaly,
Aborano Beapombo II Omby 13 maty nihinana hodi-mangahazo
Saika ripaka avokoa ny omby tao amina tokantrano iray tao amin’ny kaominina ambanivohitra Aborano, kaominina ambanivohitra Beapombo II any amin’ny distrikan’i Toliara II.
Randrana sendikaly “Vahao ny olana fa aza mifanilika andraikitra”
Ny 8 mey teo no tafapetraka tato amin’ny CNaPS ny fitakiana ny amin’ny tokony hanondrotana ny fisotroan-drononon’ireo mpiasa ihany koa, hoy, omaly tetsy amin’ny CNaPS Ampefiloha, ny Randrana sendikaly.
Tondro momba ny fahantrana Milentika hatrany i Madagasikara
Nampiakarina ny marim-pandrefesana ny fahantrana maneran-tany. Tsy 1,90 dolara (7.570Ar) intsony fa lasa 2,15 dolara (8.570Ar eo ho eo), ka izay tsy manana an'io isan'andro iainany izany dia ao anatin’ny sokajin’ny mahantra
Loza tany Bemasoandro - RN1 Tapa-tongotra ilay vehivavy nitaingina moto
Nitrangana lozam-pifamoivoizana tany amin’ny kaominina ambanivohitra Bemasoandro, lalam-pirenena voalohany ny faran’ny herinandro teo.
Fikaonandoha momba ny fambolena “Sao dia tetika hanomezana tombony ireo orinasa goavana ?”
Mampametra-panontaniana maro, hoy ny mpanao politika, Zaza Ramandimbiarison, ny mikasika ity fikaonandoha momba ny fambolena atao ny 16 hatramin’ny 18 jona ity.
Tanora TIM Ambohimanarina “Mila tanora tompon’andraikitra vonona hanova rasa isika”
Vita ny fiofanana momba ny "Call Center" dia ampidirina miasa eny anivon'ireny orinasa ireny ireo tanora vita sivana, hoy ny filohan’ny tanoran’ny antoko politika Tiako I Madagasikara na tanora TIM Eny Ambohimanarina,
Fetin’ny 26 jona ao Alasora Hotsinjovina manokana ireo sahirana
Hitsinjo manokana ireo zokiolona sy fianakaviana sahirana manerana ireo Fokontany 20 misy ao aminy ny kaominina Alasora amin’izao ankatoky ny fetin’ny Asaramanitra 26 iona izao.
Fandrisiana an-dRajoelina hirotsaka Fitiavan-tseza sa fahajambana politika ?
Taorian’ireo depiote volomboasary sasany izay efa niantso ny hirotsahan’ny Filoha am-perinasa Andry Rajoelina hofidiana indray amin’ny 2023, dia minisitra mpikamban’ny governemanta indray no niantso izany nandritra ny diany
Filohan’ny SECES Antananarivo “Mba mamakia boky ianareo tompon’andraikitra ireo”
Ny lalampanorenana ao amin’ny andininy faha 95 dia milaza fa ny lalana no mamaritra ny fitsipika mifehy, isany ny I.14, mifehy ny sata manokan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra,
AZA MIREDIREDY NAMA A !
Akoho tsy naneno ohatran’izay efa lanin’ny kary e! Ambatobevohoka tsy teraka ohatr’izay efa maty an-karanany, fa ampy izay ny rediredy sy revin-gadra.
Fandaminana etsy Andohan’Analakely Misy zavatra mbola tokony ahitsy
Notanterahina nanomboka ny sabotsy alina teo nitohy hatramin’ny afak’omaly Alahady ny andrana mikasika ny fandaminana ny fifamoivoizana vaovao etsy Andohan’Analakely,